Maitiro ekugadzira backup makopi | Gadget nhau
Ignatius Room | | Updated on 08/01/2019 20:46 | Software, Tutorials
Kugadzira backup makopi kunetsekana kuti isu tese tinofanira kujaira kana tisingade kurasikirwa zvachose neruzivo rwese rwatakachengeta pane yedu kifaa kana komputa, nekuti kunyangwe isu tichigona kuwana akasiyana manyorerwo pamusika anotibvumidza kupora data, kana kukuvara kuri kwemuviri, hazvina basa zvachose.
Mumakore achangopfuura, vashandisi vazhinji vakamira kushandisa makomputa kuchinjira kune nhare, kunyangwe ari mahwendefa kana mafoni kuti vaite chero basa: kubva kutumira email ine zvakanamatira pakunyora nekumisikidza gwaro rakaomarara, kunyangwe mune izvi zviitiko zvicharamba zviri nani uye zvakanyanya kugadzikana kuita pakombuta. Kuva neruzivo rwakawanda parunhare mbozha kwakakosha kuziva maitiro ekugadzira backup makopi.
Asi kwete chete kubva kune yedu nhare mbozha, asi zvakare kubva kumacomputer edu, chero bedzi isu tichiramba tichiishandisa kana iri yedu huru yekushandisa chombo. Zvichienderana neecosystem yatinoshandisa, zvine musoro kuti nzira yacho yakatosiyana, kunyangwe kana tikasarudza masevhisi ekuchengetedza gore, tinogona unganidza munzvimbo imwe, zvese zvinyorwa zviviri, mifananidzo uye mavhidhiyo akagadzirwa nemidziyo yakasiyana.
Nzvimbo yega yega yezvisikwa inoisa maturusi edu maturakiti, ayo sekutonga kazhinji kazhinji ndiyo sarudzo yakanakisa yekugadzira makopi ekuchengetedza. Muchikamu chino tiri kuzokuratidza akanakisa emuno sarudzo dzekuita backups paWindows, Mac, iOS uye Android.
1 Backup muWindows
2 Negadziriro yeparutivi musi Mac
3 Negadziriro yeparutivi musi Android
4 Negadziriro yeparutivi musi iOS
4.1 Zano pane backups paIOS
5 Matipi ekufunga
Kunyange chiri chokwadi kuti shanduro dzakatangira Windows 10 dzakatibvumidza kuti tigadzire makopi ekuchengetedza, zvaive zvisati zvaitika kuvhurwa kweshanduro iyi, riini maitiro ekuzviita haana kunge akareruka.
Windows 10 inotibvumira kuti tigadzire nguva nenguva makopi eiyo data ratakatosarudza kare, kubvira natively, iri basa rekuchengetedza maforodha akaiswazve nehurongwa, seMagwaro, Mifananidzo, Vhidhiyo ...
Kugonesa backups mukati Windows 10 tinofanirwa kuita anotevera matanho:
Kutanga, isu tinowana iyo Windows 10 kumisikidza kuburikidza neWindows kiyi + ini yekuraira, kana kuburikidza neKutanga menyu uye kudzvanya pane giya vhiri.
Tevere, tinya pane Kugadziridza uye chengetedzo> Backup.
Mukoramu yekurudyi, isu tinofanirwa tinya pa Wedzera chinhu.
Isu tinosarudza iyo disk drive kwatinoda kugadzira backup yekombuta yedu.
Kugadzirisa iyo data yatinoda kuti ichengetwe mu backup, tinofanirwa kubaya Dzimwe sarudzo. Mukati meiyi menyu, madhairekitori ese atinoda kuchengetwa mukuchengetedzwa kwekomputa yedu anozoratidzwa. Tinogona zvakare kudzima ndeapi madhairekitori emuno achachengetwa mu backup.
Negadziriro yeparutivi musi Mac
Apple yanga ichitipa kwemakore akati wandei mukana wekugadzira makopi ekuchengetedza kuburikidza neiyo Nguva Mashini yekushandisa, muchina wenguva, chishandiso chisiri chega chinokopa kuteedzera magwaro matsva kune yekunze hard drive, asi zvakare inogadzira kopi yemafaira ese akashandurwa uye oachengeta mune imwe kopi.
Makopi ese aunoita, vanoshanda semuchina wenguva. Mune mamwe mazwi, kana isu takatanga kushanda pagwaro svondo rapfuura uye isu tikadzima nekuti isu hatina kungovafarira, tinogona kuzvidzorera zvakare nekutamira kune iro zuva ratakasika kuti tikwanise kuwana kopi yacho.
Kuenda kuchengetedza mazuva ese makopi emafaira ese akachinjwaIzvi zvinotora nguva pfupi kuita, zvisinei, chekutanga pane zvese, kana zvichatora nguva yakareba, sezvo ichichengetera rese data data, data iro sekutadza risingambogadziriswe.
Iko kushanda kweTime Machine kuri nyore, senge chero chigadzirwa chakagadzirwa neApple, saka kunyangwe iko kuvhiya kungaratidzika kunge kwakaoma pakutanga, hakuna kana uye kudzoreredza mafaera ekare iri nyore kwazvo uye intuitive maitiro.
Negadziriro yeparutivi musi Android
Google inotipawo sarudzo iyo inotibvumidza kuchengetedza kopi yekuchengetedza yeedu terminal, kuitira kuti kana tarasikirwa, kuba kana kuparara, isu hatina kunetseka kwakapetwa nekusakwanisa kudzoreredza iyo data yaive neyedu.
Backups pane Android suye ndichave nebasa rekugadzira kopi yedata rese rakachengetwaKubva pamapassword kuenda kune Wi-Fi network, inosanganisira nhoroondo yekufona Iyo zvakare inochengetera kifaa uye data rekushandisa, mameseji, vanobata, mapikicha uye mavhidhiyo ...
Kugonesa iyo backups pa Android isu tinofanirwa kuita anotevera matanho:
Kutanga, tinokwira kumusoro Zvirongwa
Tevere, tinya pane Backup uye kudzoreredza.
Tevere, tinya pane Kopi yedhata rangu uye isu tinoshandisa switch kuitira kuti iyo terminal itange kuita backup ye data rese rakachengetwa mune yedu terminal.
Pakupedzisira, tinodzokera kumenyu yapfuura uye tinya Nhoroondo yekuchengetedza uye isu tinosimbisa iyo account yatinoda kugadzira iyo backup kopi, chero bedzi isu tine inopfuura imwechete account yakagadzirirwa mudura redu. Iyo backup yeedu Android terminal ichave yakachengetwa muGoogle Drive, saka isu tinofanirwa kuve nenzvimbo yakakwana yekuzvichengeta.
Negadziriro yeparutivi musi iOS
Apple inoita kuti iCloud yekuchengetedza sevhisi iwanikwe kwatiri, sevhisi kuburikidza nayo yatinogona kugadzira backup makopi echigadzirwa chedu chero patinenge tichida. Apple inopa 5 GB yenzvimbo yemahara zvachose kune vese vashandisi vane Apple ID, nzvimbo iyo kazhinji isingakwani kuita backup yeedu terminal.
Muzviitiko izvi, chero bedzi isu tisingadi kubhadhara kushandisa imwe nzvimbo yekuchengetera, tinogona kusarudza batanidza yedu iPhone, kana iPad, kune PC kana Mac uye gadzira backup kuburikidza iTunes, kuitira kuti kana yedu iPhone ikanganisika, kubiwa kana kurasikirwa, tinogona kugara tine kopi yezvose zvemukati zvataive takachengeta.
Iyi backup inoumbwa nevose mapikicha, mavhidhiyo, kunyorera uye chero rimwe gwaro mukati meiyo terminal. Kugadzira makopi ekuchengetedza kubva kumagumo edu tinofanirwa kuita anotevera matanho:
Mukati Zvirongwa, tinya pane mushandisi wedu uyezve ICloud.
Takabva tasimudza musoro Backup uye isu tinoshandisa inoenderana switch.
Ma backups anoitwa edu ekupedzisira muICloud iIvo vanosanganisira iyo data reakaundi, zvinyorwa, kumisikidzwa kweKumba kunyorera uye marongero eedu terminal. Aya makopi anoitwa chero nguva iyo terminal painobatanidzwa kune yazvino kuchaja, yakavharirwa uye yakabatana kune yeWi-Fi network.
Zviripachena, iyo yakawanda data yatakachengeta, yakawanda nzvimbo inoda backup. Kana isu tikadzorera iyo backup yeedu terminal, inozotora pasi rese data pamwe nemaapplication ataimboisa isu.
Zano pane backups paIOS
Kana tikataura nezve Apple's inoshanda sisitimu yemafoni, isu tinofanira kutanga tajekesa chinhu chimwe. Gore rega rega, vakomana vanobva kuCupertino vanotangisa vhezheni nyowani yeIOS inowirirana nezvose zvazvino zvishandiso zvakarova pamusika, zvichitove inowirirana nemienzaniso kusvika pamakore mashanu.
Nguva yega yega vhezheni nyowani yeIOS painotangwa, zvinogara zvichikurudzirwa kuita kumisikidza kwakachena kwechigadzirwa chedu pasina kukweva data rezvikumbiro zvataimboisa, nekuti izvi zvinodzora ruzivo rwevashandisi uye zvinogona kukonzera matambudziko ekuita pachinhu . Kana tangoita kuiswa kwakachena kwechigadzirwa chedu, Hatifanirwe KUDzoreredza backup yapfuura.
Mazhinji ezvekushandisa / masevhisi akagadzirwa kuitira kuti zuva nezuva gadzira backup pasina vashandisi kucherechedza, sarudzo yatisingafanirwe kushandura, nekuti hauzive kana yako terminal ingatambura nenjodzi.
Iyo nzvimbo yavanogara haifanire kutinetsa isu, nekuti sekutonga kwese, makopi matsva ekuchengetedza anotsiva iwo apfuura, saka nzvimbo iyo yataive tatanga kupa kuti tiite, haizowedzerwa Kunze kwekunge isu tazvitsaurira isu kutora yakawanda nhamba yemifananidzo kana mavhidhiyo.
Iyo yuniti yatinoshandisa kugadzira backup makopi, isu tinofanirwa kungoishandisa pachinangwa icho, usashandise izvo zvimwe zvinangwa sekuchengetera firimu kana mifananidzo yezuva nezuva yemushandisi. Izvo zvishoma zvatinoshandisa iro rakaomarara diski, hupenyu hwaro huchave hwakareba, uye isu hatizoisa njodzi yekuti kopi yedu yekuchengetedza ichashatiswa.
Kana mhando yefaira iwe yaunoda kuteedzera isina kusanganisira mapikicha kana mavhidhiyo, asi ari zvinyorwa chete, yakanakisa uye inokurumidza sarudzo inogona kunge iri shandisa gore rekuchengetedza sevhisi, sevhisi inobvumidza iwe kuti uwane mafaera ako kubva uye zvisinei zvaunoda uye zvinoenderana nguva dzose pamakomputa pane iko kunowirirana kunyorera.
Nenzira iyi, Google Drive ndiyo sevhisi iyo inotipa iyo yakasununguka nzvimbo, 15 GB, uye inowirirana nechero chero application yeserura, saka tichagara tichikwanisa kuvhura kana kugadzirisa zvinyorwa zvakananga kubva mugore kuburikidza neyedu kifaa. Kana isu tikarongedza mafaera kubva pakombuta yedu, anozoenderana ipapo neyakare, saka tichagara tiine yazvino vhezheni yatakarongedza yatinayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Software » Maitiro ekugadzira backup makopi
Isu tinoongorora Recoverit, iyo data kupora software